Factory Tour | Xiamen Rehefa vita pirinty Finishing Supply Co., Ltd.
Mpamokatra horonantsary maharitra mamelombelona
Coating Laminating mpanamboatra
Roll Laminating mpamatsy sarimihetsika
Fandrefesana refy namboarina
Hafainganam-pandehanana fanosorana haingam-pandeha haingam-pandeha amin'ny famokarana sarimihetsika laminating mafana misy fahana 850MTs isam-bolana.
Fizarana fototra teknika mandroso mba hiantohana ny hatevin'ny simetrika bebe kokoa sy ny tanjaka adhesion avo.
Corona dia nanasitrana horonan-taratasy laminate, corona tokana na roa sosona corona nilanja hatramin'ny 52 dinata.
Famonoana horonan-tsarimihetsika tena tsara sy famerenana amin'ny laoniny ny horonan-tsary momba ny laminasiana maharitra.
jumbo roll laminating flm spplier, thermal laminating fim, glossy ary matt, fepetra namboarina
Matt horonan-taratasy izay azo namboarina tamin'ny sakany sy ny lavany.
Xiamen Rehefa vita pirinty Finishing Supply Co., Ltd. Hatreto dia mizara roa ny tsipika fanosotra extrusion valo sy milina fanosotra folo nivory mba hamokarana horonan-tsary plastika misy horonantsary laminating mafana, mamoaka 750MT isam-bolana.
Mba hiantohana ny horonan-tsarimihetsika laminating tsara kalitao, ny fantsom-panafody ataonay dia ampiasain'ny piesy ara-teknika mandroso indrindra izay manome antoka ny hatevin'ny fonosana symmetrika tsara indrindra sy ny tanjaka adhesion avo lenta.
Mandritra ny ankamaroan'ny fotoana, alohan'ny famerenana na fametahana azy dia maina mandritra ny iray andro ny horonan-taratasy laminated aorian'ny nopetahan'ny lakaoly mametaka EVA. Ity dingana ity dia manamafy ny lanjan'ny adhesion ary mamela ny horonan-taratasy plastika laminate malama kokoa na dia mampihena ny static aza.
Fampahalalana bebe kokoa momba ny lamination termal, io dia dingana lamination izay anaovantsika laminate noho ny vokatry ny hafanana. Antsoinay hoe lamination hafanana na maina koa izy io. Ireo horonan-tsarimihetsika vita amin'ny laminaty ireo dia novokarin'ny fizotran'ny fitrandrahana extrusion ary amin'ny lafiny iray amin'ny sarimihetsika lakaoly mafana hafanana dia vita, ny ankamaroany dia ny BOPP + EVA na PET + EVA.
Ny laminating mafana dia mamakivaky ny horonan-taratasy na laminatorana mafana. Mila mampihatra tsindry mety isika ary vita ny lamination. Ny lamination maina dia lasa mahasoa kokoa noho ny tombony azony amin'ny laminaty lena. Tsy mila mampiditra adhesive hafa amin'ny laminate isika.
Mahaliana ny etsy ambony?
Aza misalasala mifandray aminay:
#Website: https://www. After-printing.com
# E-mail (sales@ After-printing.com) #Skype (sarimihetsika plastika)
Stamp mafana, Hot Foil, Fametahana foil mafana, sarimihetsika lamination hafanana, mpanamboatra sarimihetsika bopp metallized, sarimihetsika polyester,
sarimihetsika lamination mafana, sarimihetsika lamination bopp, horonan-tsarimihetsika laminating, horonantsary mikasika malefaka, horonantsary mahatohitra, foil manosotra mafana, foil fanosehana mangatsiaka, horonantsary mampihena ny sarimihetsika, sarimihetsika lamination